Drives ara-tsakafo sy famatsiam-bola - Banky Sakafo any Galveston County
Mponina 1 amin'ny 6 ao amin'ny County Galveston no miatrika tsy fahatokisana sakafo isan'andro.
AZO atao ny manisy fiovana amin'ny mpiara-monina mila fanampiana.
Manaova fampiantranoana sakafo na famatsiam-bola!
Tsindrio eto raha hisintona fonosana momba ny sakafo sy ny tahirim-bola
Tsindrio Eto raha hijery ny lisitr'ireo asa soa AmazonSmile ankehitriny
Tsindrio ny Logo anay raha misintona kinova famahana avo lenta ho an'ny fitaovanao ara-barotra
Sakafo mitondra entana amin'ny volana
Zavatra ho avy amin'ny volana
Mifandraisa amin'i Julie Morreale ao amin'ny Julie@galvestoncountyfoodbank.org
FAQs mitondra any amin'ny sakafo
Iza no afaka mampiantrano sakafo?
Izay te hanampy amin'ny famaranana ny hanoanana dia afaka mampiantrano sakafo. Olona, ​​fianakaviana, vondrona, klioba, fikambanana, fiangonana, orinasa, sekoly sns…
Karazan-javatra inona no ekenao amin'ny mpamily sakafo?
Entana maina toy ny: vary, tsaramaso, paty, serealy, oatmeal, sns…
Entana am-bifotsy toy ny lasopy, legioma, tuna, akoho, tsaramaso, sns…
Ny entana am-bifotsy pop-top sy ny entana mora misokatra dia ankasitrahana indrindra
Eny, manaiky zavatra ara-pahadiovana ihany koa izahay toa ny;
kojakoja sakafo an-trano
sakafo mora simba izay mila vata fampangatsiahana
entana misy daty lany daty
entana izay totofana na simba.
Manendre mpandrindra hanara-maso ny fizotran'ny sakafo.
Misafidiana tanjona iray hividianana sakafo tianao.
Safidio ny daty tianao hivezivezy mitondra ny sakafonao.
Safidio ny Toeranao hanangonana zavatra, faritra fivezivezena be izay azo antoka.
Misoratra anarana miaraka amin'ny GCFB amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fisoratana anarana fandraisana anjara amin'ny lisitra Food & Fund Drive.
Amporisiho ny Drive anao hampahafantatra amin'ny hafa ny hetsika nataonao tamin'ny alàlan'ny taratasy, mailaka, flyer ary tranokala.
Ampidino ny fonosana Food & Fund Drive
Inona avy ireo fomba sasany ahafahana mihazakazaka mitondra fiara?
Entana sakafo maraina: serealy, oatmeal, bar cereal, sakafo maraina eo noho eo, mixes pancake sns.
Ankafizin'ny ankizy: ranom-boankazo, dibera voanjo, bara granola, makaroni & fromazy, Chef Boyardee, serealy
Fotoana fisakafoanana: Pasta, saosy Marinara, hena am-bifotsy toy ny akoho na tuna, "Sakafo ao anaty boaty" toa ny Tuna Helper, Betty Crocker Helper Lengkap Sakafo, sns.
Sakafo atoandro brown brown: Amporisiho ny vondrona misy anao mba hitondra sakafo atoandro kitapo volontsôkôlà ary hanome ny vola tokony ho lanin'izy ireo tamin'ny fisakafoanana antoandro.
Ataovy fifaninanana ity:
Mampiasà fifaninanana am-pirahalalahana mba hahatonga ny vondrona misy anao hazoto hanome bebe kokoa. Mamorona ekipa eo anelanelan'ny efitrano fianarana, sampana, vondrona, gorodona sns. Hahitanao hoe iza no manangona sakafo betsaka indrindra. Hamarino tsara fa ireo "mpandresy" dia mahazo fankasitrahana manokana amin'ny fandraisany anjara.
Lalao nataon'ny orinasa:
Manontania raha afaka mampitovy ny fanomezana ny sakafo any amin'ny Galveston County Food Bank ny orinasanao amin'ny alàlan'ny fametrahana vola dolara natolotra isaky ny kilao ny sakafo voaangona. Mifandraisa amin'ny Departemantan'ny Human Resources an'ny orinasanao momba ny programa lalao ara-bola.
Ahoana no hataoko amin'ny fampahalalana ny fiara mitondra sakafo?
Misy sary famantarana ofisialy GCFB ofisialy avo lenta amin'ity pejy ity azo alaina. Azafady mba ampidiro ny sary famantarana anay amin'ny fitaovana marketing nataonao ho an'ny hetsika fizahana sakafo. Raha mila torohevitra misimisy momba ny famoronana fitaovam-barotra dia sintomy ny fonosana Food & Fund Drive.
Ny entana rehetra natolotra dia ekena ao amin'ny trano fanatobiana entana any amin'ny 624 4th Ave N, Texas City, TX. 77590. Alatsinainy - Zoma 8 maraina ka hatramin'ny 3 hariva.
Mandray fanomezana ve ny GCFB?
Voarara ny fakana sakafo ho an'ny fanomezana rehefa manangona pickup kely isika. Mangataka izahay fa raha ny habetsaky ny sakafo voaangona dia latsaky ny mety tafiditra ao ambadiky ny kamiao feno habeny, azafady mba alefaso amin'ny trano fivarotanay amin'ny 624 4th Ave N, Texas City, Alatsinainy - Zoma manomboka amin'ny 8 maraina ka hatramin'ny 3 hariva. (Azafady miantso alohan'ny fandefasana mba hampandre ny mpiasa) Raha mila fanampiana lehibe kokoa dia mifandraisa amin'i Julie Morreale amin'ny 409-945-4232.
FAQ momba ny familiana vola
Ahoana no fanangonana vola amin'ny famatsiam-bola?
Ny vola dia azo angonina ho vola, hizaha na amin'ny Internet ao amin'ny tranokalanay, www.galvestoncountyfoodbank.org.
Ho an'ny fanamarinana, azafady mandoa vola amin'ny Galveston County Food Bank. Mariho ny anaran'ny fikambanana / vondrona misy anao eo amin'ny farany ambany ankavanan'ny fanamarinana, amin'izay dia hahazo trosa ny hetsikao. Jereo ny fonosana Food & Fund Drive ohatra.
Ahoana no ahafahako manomboka fanangonana vola amin'ny Internet?
Mora ny manomboka famoriam-bola amin'ny Internet amin'ny fitsidihana ny pejy JustGiving Eto . Amboary ny pejy, mametraha tanjona ary zarao ny rohy mankamin'ny pejy fanangonam-bola an-tserasera amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny facebook sy twitter hampielezana ny vaovao.
Azafady mba alao antoka fa asio marika izahay amin'ny media sosialy.